Noendahin’ny jiolahy telo lahy tamin’ny 6 ora sy sasany maraina ny mpivarotra ambongadiny ao Ampitamalama, izay saika handeha hividy entana any Antsirabe. « Lasan’izy ireo ny vola Ar 11 tapitrisa taty amiko sy ny môtôko », hoy ilay mpivarotra. Naratra be ilay voaendaka fa mbola afaka niantso vonjy, ka nanara-dia ireo olon-dratsy sy ny fokonolona. Vetivety dia tratra tao an-tampon-tanànan’i Soanindrariny ny iray. Io no nanoro ny namany roa hafa sy ny toerana misy ilay môtô.
Efa hovonoin’ny olona ireo jiolahy, izay tsy neken’izy ireo hatolotra ny zandary, saingy nalaky tonga nanelanelana ny Ben’ny tanàna. Nohadohadian’ny zandary tany Sahanivotry ireo olon-dratsy.
Ny tolakandron’io alarobia io dia efa nisy andian’olona niandry ny fiverenan’ireo zandary tao Antaninkatsaka. Mbola nitaky fitsaram-bahoaka ihany ny fokonolona. Nandamina ny zandary, saingy tora-bato no nasetrin’izy ireo izany. « Naratra ny zandary telo. Naheno ny korontana ny zandary 5 hafa miasa tamina toerana tsy mifanalavitra ka voatery nitifitra. Nahavoa olona 2 teo amin’ny kibony sy 2 hafa teo amin’ny tongony ny balan’izy ireo », hoy ny nahita maso.